NOOCYO IYO NOOCYO YARYAR - BEERTA
Almond waa geedka ama geed ku dhaca caanaha xayawaanka. Dhulka dhul-beereedka waxaa loo tixgeliyaa Mediterranean iyo Central Aasiya. Maalmahan waxaa lagu beeray Shiinaha, Mareykanka, Crimean iyo Caucasus, Ruushka, Slovakia iyo Czech Republic, Moravia.
Almond caadi ah
Almond caadi ah ayaa u qaybsan laba qaybood oo hoose: Badbaadada duurjoogta ah (qadhaadh) iyo yicib waa macaan.
Cayayaanka duurjoogta ah waxaa ku jira astaamaha prussic ee kernels, sidaas darteed waxaa lagu koray ujeedooyin daaweyneed.
Cuntada lagu cuno waa macaan.
Waxaa jira noocyo yaryar, kaas oo u koraan baadiyaha, iyo waxaa jira noocyo in koraan qoryo. Xayawaankani wuxuu koraa lix mitir oo dherer ah.
Jilbaha on jirridda ee yaryar waxaa ku jira midab madow, on laamaha leh cows naxaas ah, in dhalinyarada afkoda waa casaan. Caleemaha waa cidhiidhi, oo leh petiole dheer iyo caarad fiiqan, qarkoodna ka ah saxanka caleen - ilkaha. Qaababka caleemaha waa ovalaha qafiifka ah.
Almonds, ku xiran tahay kala duwan, Bloom laga bilaabo February ilaa April, taas oo xiiso - ka hor caleemaha Bloom. Wuxuu leeyahay caleemo cad ama cagaaran oo kor u kaca.
Midhaha dhirta geedka waxay u bislaadaan Juun - Julaay. Drupes waxaa lagu jajabiyey godad cagaaran ama midab cagaaran, farcanku waa lowska qolof dhuuban. Nooca lafta waxay la mid tahay ciddiyaha: hal gacan - ku wareegsan, dhinaca kale - si habsami leh u calaamadsan. Nutsku waa weyn, ilaa 2 cm dheer.
Ma taqaanaa? Masar hore, qaabka bogsashada ee yicibta ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo jiritaanka haweenka uurka leh. Midhaha geedka waxaa loo adeegsaday miiska mawduucyada muhiimka ah iyo falsafadaha.
Badanaada yaryar ee almond wuxuu koraa ilaa hal mitir iyo badh. Noocadani waa geed cireed. Waxay leedahay taajir cufan, sameysma kubad, oo leh laamo waaweyn oo adag. Jilibku wuxuu ku yaalaa casaan leh casaan. Wuxuu ka tagaa cufnaanta cufan, fareeshka, qulubsan, cirridka. Dhirta dhererka ilaa 6 cm, midabka - cagaar mugdi ah oo ku taal saxanka sare oo ka hooseeya dhinaca hoose.
At bobovnika lush, laakiin ubax gaaban. Almond canabku wuu hooseeyaa dhammaadka March - horraantii Abriil. Burooyinkeeda yar ee hoyga burgundy waxay ku yaallaan caleemaha gaaban ee gaaban. Blooming ubax dhexdhexaad ah ilaa 3 cm, midab casaan leh oo leh caraf udgoon.
Noocan ah Badbaadada waxaa lagu kala diraa isku mar la caleemaha. Ubaxku wuxuu socdaa wax ka yar laba asbuuc. Miro qalalan qaabka ukunta ilaa 2 cm oo dheer, dhajisey iyo qoryaha. Bisaylkiisa miro wuxuu dhacaa July. Abuurka ayaa cufan, oo leh jilbaaxo dheer, la cuni karo. Noocyadaas waxaa lagu matalaa noocyo leh ubaxyo cadcad iyo casaan.
Almond baadiyaha White Sail - Tani waa geed canab ah oo midabkiisu baraf cad yahay. Ubaxyada ku jira ubaxyada ubaxyada badan, waxaa macno ahaan loola jeedaa iyaga. Dhexdhexaadiyaha ubaxa waa qiyaastii 10 mm. "Cagaarka Cagaaran" wakhti dheer wuxuu samayn karaa iyada oo aan lahayn waraabka: warshadkan koonfurta wuxuu u adkaysanayaa abaarta.
"Annie" blooms horaantii April, isagoo daboolaya taajka leh ubaxyo casaan dhalaalaya ilaa 2.5 cm dhexroor. Bisaylkiisa miro wuxuu bilaabmaa bilawga xilliga dayrta, dhammaadka bisha Sebtembar. Nutsku waa weyn - ilaa 6 cm dherer, abuur oo leh caraf udgoon iyo dhadhan macaan oo macaan.
Almond baadiyaha "Riyo" jecel yahay in ay ku koraan meelaha bannaan, ayaa iftiiminaya inta badan maalinta qorraxda tooska ah. Wuxuu dareemaa wanaag fiican ee penumbra. Warshadu waxay ka cabsaneysaa mashaariicda iyo isbeddel deg-deg ah heerkulka. "Duco" ubaxyo leh ubaxyo casaan jilicsan oo kaliya 2 cm dhexroor.
"Pink Flamingo" - Tani waa kala duwanaansho hore ee caleemaha yar yar, waxa uu ku dhowaad usbuuc ka hor ka badan noocyo kale. Dhirta ubaxyada ah ee Terry, yaryar, ilaa illaa mitir dhexdhexaad ah, ubax casaan ah. Kala duwanaanshahan badanaa waxaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka, sidoo kale beauticians waxay jecel yihiin.
Waa muhiim! Neefta lafaha leh, sababtoo ah sunta, waxay sababi kartaa dhimashada aadanaha. Ilmo ka yar 12 sano jir wuxuu u baahan yahay inuu cuno toban abuur, iyo qof qaangaar ah oo ku saabsan konton.
Kala sooc "Pink Mist" dheer ee ubaxyada hooska, iyo aad u qurux badan oo qorraxda oo buuxa. Kala duwan tani waxay leedahay ballaaran, ilaa 2.5 cm dhexroor, ubaxyo casaan leh.
Almond Georgian - In la eego aag kooban oo qaybin ah, waxay ku koraan Cawaguus. Waxay ku koraan baadiyaha, oo u eg muuqaalka cufan. Noocyada waxay leeyihiin laanta yar, laakiin nidaamyada xididdo badan.
Leaves, ku xiran tahay kala duwan, waxay noqon kartaa ballaaran oo dhuuban, illaa 8 cm dherer. Ubaxyo waaweyn, inta badan casaan, ubaxyada May. Kala duwan ma midho dhaadheer, miraha waa baruurta, cagaaran oo leh midab cawl.
Badbaadadani waa baraf u adkaysta, abaarta u adkaysata oo aan hoos u dhigin dhulka. Tayo-yadaasi waxay dhirta ka dhigaan mid qiimo leh marka la eego taranka. Marka lagu daro sifooyinka kor ku xusan, dhirta ayaa u adkaysata cudurrada iyo cayayaanka. Iyadoo daryeel wanaagsan oo haboon ayaa sifuduwaha dabeecadaha illaa soddon sano ah.
Xiiso leh Inta lagu guda jiro yicib ubaxyada quruxda leh ee quruxda quruxda badan leh. Midabkeeda waxaa lagu heesay gabayada, qorayaasha, iyo fannaaniinta. Aragtida cirridka ee yicibta waxaa ku dhuftay Garsevan Cholokashvili, Frida Polak, Konstantin Paustovsky. Noocyada Almond waxay dhiirigeliyeen Vincent Van Gogh inay sawiraan sawir magac leh.
Goobta qaybinta Almond Ledebour - Altai. Wuxuu ku koraa daaraha, cawska iyo steppes. Dhirta ayaa doorbidaysa qoyaanka ciidda dhexdhexaad ah, si fiican u pollinated cayayaanka.
Almond Ledebura baraf u adkaysta, iftiin-jecel iyo ubaxu. In dabiiciga ah, Badmaalka ee noocan ah foomamka caleemo duurka oo leh caleemo cagaaran oo cagaaran.
Dhirta ubaxu waxay horay u soo baxaan noocyo kale oo ubaxyo casaan ah, ubaxu wuxuu soconayaa ilaa saddex toddobaad. Almond Ledebour miraha laga bilaabo da'da toban. Kala duwanaanshaha ugu caansan waa Fire Hill oo leh ubaxyo guduudan ilaa 3 cm dhexroor.
Almond Petunnikova - geedo hoose, oo aan ka badnayn mitir. Aagga qaybinta - Dhexe Aasiya. Badanaa waxaa la gooyaa laanta taajka cufan qaabka kubbada. Shimbiraha caleenta ah waxay ku rogrogaan cawl leh jilbaha madow ama jilicsan jaale ah.
Ka baxaa jajab isku dhajisan oo qotodheer, qaabka lanceolate iyo caarada fiiqan. Ubaxku wuxuu bilaabmaa da'da saddex jir, bisha Maajo. Almond blossoms ee casaan, ubaxu wuxuu soconayaa laba asbuuc. Marka ay da'diisu tahay shan badmeed waxay bilaabaan inay midho u dhasho. Miraha waa yaryihiin, barafka, orange ama jaalle-cawlan midabka.
Saddex koob oo ah Almond
Saddex koob oo ah Almond - Tani waa dherer dheer oo leh ballaaran oo tufaax ah.
Magaca almond waxaa laga soo qaatay qaabka caleemaha, sameynta saddex lakab-saxaarada.
Caleemaha waxaa lagu daboolay foorno hoose oo ku taal saxanka caleenka ah, oo la jarjaray geeska ilkaha. Ubax ee midabada kala duwan iyo dhexroorka, ayaa loo diyaariyaa laba-labo on biqil.
Waxaa jira laba qaybood oo lagu qurxiyo:
"Qabashada" - oo leh ubax laba, weyn - ilaa 4 cm dhexroor. Tufaaxa Pink Bloom ka dib caleemaha. Booska wuxuu koraa ilaa 3 m dherarka;
"Kiev" - ilaa 3.5 m dherar, ubax geedka. Ubaxyada ubaxa ah ee ubaxyada ka hor inta caleemaha, ubaxa waa weyn, Terry.
Noocyada waxaa ka muuqda noocyo badan iyo bacrimiyeyaal.
"Svitlana" - kala duwan oo ay bred by Ukrsiyaanka Yukreeniyaan. Kala duwan waa baraf u adkaysta, aan qabyo ahayn. Ubax ee "Svitlana" ayaa hoos u muuqda. Blooms, si xamaasad leh, xitaa daryeel yar.
"Tanya" - Badanaada leh ubaxyo badan oo leh ballaciisu yahay illaa 3.5 cm. Kala duwan waa mid u adkaysata dhaxan, ma dhimanayo -25 ° C. Kaliya boogaha dheerka ah iyo daboolka barafka ayaa ka dhigi kara khatar. Isla markiiba burooyinkoodii yicib way u dhintaan.
"Xusuusin Makhmet" - Bloom kala duwan ka hor caleemaha Bloom. Wuxuu leeyahay laba ubax oo midab casaan leh. Ubaxku wuxuu soconayaa illaa laba toddobaad. Muuqaalka dhirta inta badan dhirta qoryaha geedaha ku xiga.
"Shiinaha Shiinaha" - noocyo kala duwan oo ubaxyo casaan leh, ma aha terry. "Shiinaha Shiinaha" waxay dareensan yihiin in ay ku fiican yihiin beeraha magaalooyinka, beeraha iyo waliba.
Digniin! Badanaaba seddex lakabyo ayaa u nugul "monilia" (fungus), cudurkani wuxuu saameeyaa caleemaha tabarta yar. For prophylaxis, manjooyin sanadle ah waxaa la fuliyaa ka dib xilliga ubax.
"Snow Wimura" - Cannabis saddexda joodar leh. Ubaxyo waaweyn oo ah casaan casaan leh dhamaadka ubax, beddel midabka kareemka. Geedku wuxuu si fiican u dareemaa aagagga furan ee ku xoortay geedaha qurxinta iyo geedaha.
"Ruslana" - kala duwan ee hybrid, beddelka hadhka. Bilowga ubaxyada, tufaaxa midabada leh ayaa caddaanaya.
Almond waa mid caan ah oo caafimaad leh. Miraha waxaa loo isticmaalaa maaha oo kaliya daawada iyo qurxinta, naasaha miraha ka caawiya marinka daawooyinka ama miisaanka yareynaya cuntada.
Almonds ayaa sidoo kale caan ku ah karinta, iyo keega quruxda badan leh, keega, kalluunka, kareemyada iyo macmacaanka kale ayaa la aasaasay. Almonds ayaa si ballaaran loo isticmaalaa soo saarida khamriga. Beeraha ubaxyada ah ee ubaxyada ah waxay qurxiyaan jardiinooyin, beero iyo alleys.